Warshada wax-soo-saarka wax-soo-saarka-Shiinaha ee wax-soo-saareyaasha, alaab-qeybiyeyaasha
Mashiinka Qodista Rotary wuxuu isticmaalay rarista sare ee giraanta wax lagu gooyo
Saddexda saf ee rullaluistu waxay leedahay saddex siddo oo kursi, kuwaas oo kala saaraya dariiqyada tartanka sare, hoose iyo radial, waxay ka dhigtay saf kasta oo ka mid ah awoodda culeyska rullaluistu waa la cayimi karaa oo qaadi karaa culaysyo kala duwan isku mar.
La habeeyay Hal saf oo afar ah kubbadda la isku dhufto oo aan marsho lahayn
Dhalashada Slewing ee gaarka ah
Waxaan u naqshadeynaa sawirka sida shuruudaha macaamiisha
Safka kaliya ee afar-dhibcood ee aan gashanayn kubad xidhiidhka ah ee giraanta sidata
XZWD giraanta wax lagu dilo oo tayo sare leh oo loogu talagalay trailer-miiska Rota
Hal saf oo afar-dhibcood ah oo kubbadda wax lagu dhufto ayaa loo isticmaali karaa trailer-ka gaadhiga fidsan.
XZWD tayada sare leh ee wax lagu jiido wiishashka badda
Qaadashada wiishka baddu waxay u isticmaashay macmiilka giraanta kubbadda xidhiidhka afar-dhibcood ee laba-lay ah.
Mashiinada shaqada culus waxay adeegsadeen kubad laba saf ah oo wax lagu garaaco giraanta
Haddii aad u baahan tahay wax-ku-dhufashada waajibaadka culus, waxaanu kugula talinaynaa kubbadda kubbadda-saafka laba-saafka ah.
Waxay qaadi karaan culeys weyn oo axial ah iyo rarka radial.Waxay si gaar ah ugu habboon tahay mashiinnada culus ee u baahan dhexroorka waaweyn.
Sida kuwa qodaya taayirrada baaldiyada iyo nooca taayirrada, wiishashyada markabka, wiishashyada dekedaha, meelaha birta dhalaalaysa ee lagu ordo iyo wiishashka xamuulka qaada ee waaweyn iyo mashiinada kale.
XZWD Gear Dibeda Wax-u-qaadis u leh awoodda dabaysha
XZWD Gear Dibeda Wax u xamaasha tamarta dabaysha oo leh dahaadh zinc ah iyo deminta ilkaha
Wax soo saarka tayada sare leh ee XZWD 077 giraanta wax lagu dilo ee taxane ah oo leh qalabka silsiladda
Xuzhou Wanda(XZWD) giraanta wax lagu dilo 077 taxane waa agiraanta wax lagu dilo kaas oo ku milmi kara sprocket.
XZWD Giraashyada giraanta Slewing ee tamarta dabaysha
TheWax qabadwaa qaybta xudunta u ah marawaxadaha dabaysha
Marawaxadaha dabaysha ayaa hadda inta badan qaata akubbadda laba-saafka ah ee afar-dhibcood ee kubbadda xidhiidhka
Ilkaha ummulida degdega ah ee engegnaanta leh ee dhalmada ee Tadana Crane
OEM Slewing bearing ee macaamiisha leh qiimaha orso
013 Gear Internal Slewing Bearing excavator Swing giraanta
Soo saaraha xirfadda leh ee wax lagu dilo iyo wadista wax disha
Alaab-qeybiye si aad u badan oo Qodista